နာမည်ဆိုတာက တစ်စုံတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် အရပ်ဒေသတစ်ခုရဲ့ အမှတ်သညာပါ။ တစ်ခါတလေကျရင် နာမည်ကြားလိုက်ရုံနဲ့တင် သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုကို ပြေးမြင်သွားစေလောက်အောင်အထိ နာမည်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုက အင်မတန်ကြီးမားလှပါတယ်။ တချို့နာမည်တွေကျတော့လည်း ကြားလိုက်ရုံနဲ့တင်ကြက်သီးထသွားစေတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ဒီလိုမျိုးနာမည်နဲ့မြို့ရွာတွေက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေအသီးသီးမှာရှိနေပါတယ်။ ဘာတွေဖြစ်မလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်။
စဥ်းစားတာက ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့အရာတွေကျ ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး မစဥ်းစားသင့်ဘူးဆိုတာကို ဒီမြို့နာမည်က သက်သေပြနေပါတယ်။
ဆံရစ်ဝိုင်းကျေးရွာလို့လည်း နာမည်ကြီးတာနဲ့ စက်စက်ယိုကျေးရွာကလည်း နာမည်ဆန်းဆန်းလေးနဲ့ တည်ရှိနေတာပေါ့။ လှချင်လျက် စက်စက်ယိုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ ဒီရွာလေးကတော့ သူတို့ရဲ့အမှတ်အသားနဲ့ သူတို့ လှပနေပါတယ်။
မြို့နာမည်ကို ဒီတိုင်းနားထောင်ရင်းနဲ့ပဲ ဒီမြို့ကို သွားချင်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေ တော်တော်များမှာပဲနော်။ တကယ်တမ်းမြို့နာမည်အတိုင်း မိန်းမတွေချည်းရှိရင် ဘယ်လောက်တောင် နားငြီးမလဲ စဥ်းစားကြည့်ပေါ့။
ဒီမြို့ကတော့ နာမည်နဲ့တင် ယောက်ျားမိန်းမ,မရွေး ကလေးလူကြီးပါမကျန် မြို့ထဲဝင်ချင်စိတ် ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီရွာကလူတွေ ဘာများစားချင်လဲ သိချင်ပါရဲ့နော်ဆိုပြီး တွေးနေကြမှာပါ။။ ပင်လယ်နဲ့နီးတော့ ငါးတွေ၊ ပုစွန်တွေပဲစားမလား။ ဒါမှမဟုတ် ခေတ်ဆန်ဆန်ပဲ ပါစတာတို့ ဆူရှီတို့စားမလားပေါ့။
ရာဇဝင်ထဲက ဘယ်သူများအသည်းကွဲပြီး အမုန်းတရားတွေနဲ့ ဒီမြို့ကို တည်ခဲ့လားဆိုပြီး စဥ်းစားနေမှာပါ။ မုန်းမြို့သူ၊ မြို့သားတွေကရော မချစ်တတ်ကြဘူးလား။
ကဲ…. လူပျိုကြီးတို့ရေ ….။ စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့တော့နော်။ ဒီကျေးရွာလေးကိုသာ အရောက်သွားလိုက်ရင် တစ်ခုခုတော့ ထူးခြားလာမှာပေါ့။
တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရရင်တော့ FA တွေသွားရင် မျက်နှာငယ်ရမယ့်ရွာပေါ့။ တစ်ရွာလုံးချစ်သူတွေ၊ အတွဲတွေချည်းပဲလား??? ရောက်ဖူးတဲ့သူတွေရှိရင် ပြောပြကြပါဦး။
ဒီရွာထဲကသူတွေ သူတို့ရွာနာမည်နဲ့တင် ညညအိပ်ပျော်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရှာရှာကြံကြံ မီးလောင်အုပ်စုက မီးလောင်ကျေးရွာတဲ့။
သားကြီး။ လာ …. ကြိုက်တာချကွာဆိုတဲ့စကားကို ဘီယာဆိုင်မှာပဲ ကြားရမယ်ထင်တာ။ အခုတော့ ရွာလိုက်ကြီးကို ရှိနေတော့တာပဲ။
ရောက်တောင်မရောက်သေးဘူး၊ ပြန်လှည့်ခိုင်းနေပြီလား ဒီရွာက။ ပြန်မလှည့်ဘဲ အတင်းများဝင်သွားရင် ဘာတွေများဖြစ်နိုင်မလဲ ချောချောလေးတစ်ယောက်က လာပြောပြပေးပါလား။
ဟင့်အင်း… မလုပ်ပါဘူး။ ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ ရွာနာမည်နဲ့တင်ကို ကြက်သီးထနေပြီနော်။ အဟင်း အဟင်း….။
နာမည်နဲ့တင်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေတာနော်။ ဒီမြို့ဝင်ဆိုင်းဘုတ်နဲ့ ဓာတ်ပုံလေးဘာလေးသွားရိုက်ထားမှပါ။
အင်းပါ။ ရပါတယ်။ ရွာနာမည်ကို ဖတ်လိုက်တာနဲ့ နှုတ်ခမ်းကြီးစူပြီး ပြောနေတာကို မြင်ယောင်၊ ကြားယောင်မိသလို ဖြစ်သွားတာ တော်ရုံစကေးတော့မဟုတ်ဘူး။
ရွှေပင်လယ်ကြီးတို့ ငွေပင်လယ်ကြီးတို့ပဲ ကြားဖူးပါတယ်။ ဒီပင်လယ်ကြီးကတော့ ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။
ရွာထဲတောင် မလာရဲတော့ဘူး။ ရွာလုံးကျွတ်များ ပါးရိုက်ပက်စက်လို့ ဒီလိုနာမည်ပေးထားတာလား စဥ်းစားစရာရှိနေပါပြီ။
တကယ်လား။ သေချာတယ်နော်။ အဲ့ဒါဆို ယောက်ျားလေးတွေ အဲ့ဒီရွာကို သွားမလည်ဖို့ ပြောပေးလိုက်မယ်။
ရွာထဲတောင် မဝင်ရသေးဘူး၊ ရွာထိပ်ကဆီးကြိုပြီး အဆဲခံရတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးမှအစစ်နော်။
ဘဲကြီးရေ…. ကောင်းတာတွေ ဘယ်လောက်အထိများ လုပ်ထားလို့ စံပြဖြစ်နေရတာလဲ။
ဆန်ချင်တာဆန်၊ အဲ့ဒါတော့ မဆန်နဲ့နော် ဆိုသလိုပေါ့။ ဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့ ရွာနာမည်ကို ဒီလိုပေးထားလဲ သိချင်လိုက်တာနော်။
ပရိသတ်ကြီးရေ…။ အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ မြို့တွေနဲ့ရွာတွေရဲ့ နာမည်လေးတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပဲ ရှိနေတာပါနော်။ နာမည်လေးက ဆန်းဆန်းလေးတွေလည်းဖြစ်၊ အခြားအဓိပ္ပါယ်လည်းကောက်လို့ရ၊ ဟာသလည်းဆန်တာကြောင့် အခုလို အားလပ်ရက်မှာ ပရိသတ်ကြီး ရယ်မောနိုင်ဖို့အတွက် အရွှန်းဖောက်ပြီး တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့ လူတွေထက် ပိုပြီးချမ်းသာကြသော Instagram က အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် (၁၀) ကောင်
ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်ရတာဟာ bucks (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဗန်းစကား) အမြောက်အများကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေဟာ အင်စတာဂရမ်ပေါ်က လူကြိုက်အများဆုံးအအောင်မြင်ဆုံးဗီဒီယိုတွေကို ရိုက်နေကြပြီး ဒေါ်လာ ၇၉ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ၎င်းတို့ဟာ လူသားဒစ်ဂျစ်တယ်...